Cdk5 Phosphorylates Dopamine D2 Receptor နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြစနစ် (2013) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
မှတ်ချက်များ - Cdk5 သည် dopamine D2 receptors ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချုံ့သည်ကိုပြသသည်။ အံ့သြစရာကဘာသာပြန် deltafosb သည် Cdk5 ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အောက်ခြေလိုင်း Deltafosb သည် sensitization နှင့် desensitization နှစ်ခုလုံးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်
Jeong J ကို, ပန်းခြံ YU ကင်မ် DK, Lee က S နဲ့, Kwak Y ကို, et al ။ (2013) PLoS ONE 8 (12): e84482 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0084482
အဆိုပါ dopamine D2 အဲဒီ receptor (DRD2) ထိုသို့သောစိတ်ဓါတ်များ, ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် dopamine-ဆက်နွယ်ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ mediates တဲ့ key ကိုအဲဒီ receptor ဖြစ်ပါတယ်။ Cyclin-မှီခို kinase5(Cdk5) အဘယ်သူ၏ function ကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပြီးတစ်ဦး proline-ညွှန်ကြား serine / threonine kinase ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ DRD321 (D321i2) ၏တတိယ intracellular ကွင်းဆက်အတွက် serine2ကျန်ကြွင်း (S3) Cdk5 တစ်ဝတ္ထုစည်းမျဉ်း site ကိုဖြစ်၏။ ထင်ရှား အဆိုပါ D5i321 အတွက် S2 ၏ Cdk3-မှီခို phosphorylation အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် စသည်တို့အတွက် နှင့်ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုစနစ်တွေ။
ကျနော်တို့နောက်ထပ် S321 ၏ phosphorylation DRD2 ၏ agonist-နှိုးဆွမျက်နှာပြင်စကားရပ်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့် DRD2 ဖို့, G ပရိုတိန်းနားချင်းဆက်မှီလျော့နည်းသွားကြောင်းလေ့လာသည်။ ထို့အပြင်မြစ်အောက်ပိုင်းစခန်းလမ်းကြောင်းဟာဆိုတဲ့ Heterologous စနစ်နှင့်ကြောင့် DRD35 ၏လျှော့ချ inhibitory လှုပ်ရှားမှုဖွယ်ရှိ p2 နောက်ကောက်သန္ဓေသားများထံမှမူလတန်းတွင် neuron ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည် S5 ၏ Cdk321-mediated phosphorylation, DRD2 function ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် dopamine အချက်ပြများအတွက်ဝတ္ထုစည်းမျဉ်းယန္တရားပေးကြောင်းညွှန်ပြ။
ကိုးကား: Jeong J ကို, ပန်းခြံ YU ကင်မ် DK, Lee က S နဲ့, Kwak Y ကို, et al ။ (2013) Cdk5 Dopamine D2 receptor Phosphorylates နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်း signal Attenuates ။ PLoS ONE 8 (12): e84482 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0084482
အယ်ဒီတာ: ဂျိမ်း Porter, မြောက်ဒါကိုတာတက္ကသိုလ်, အမေရိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Received: မေလ 20, 2013; လက်ခံခဲ့သည်: နိုဝင်ဘာလ 14, 2013; Published: ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2013
မူပိုင်: © 2013 Jeong et al ။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ဤလုပ်ငန်းကိုကိုရီးယားအစိုးရက (MSIP) ထံမှထောက်ပံ့ငွေ (NRF-2012R1A2A2A01012923 နှင့် NRF-2012R1A4A1028200) ကထောက်ပံ့ထားလည်းကိုရီးယား NRF (2012K2A1A2033117) နှင့်ကိုရီးယားဦးနှောက်သုတေသနအင်စတီကျု (KBRI) ကစီမံခန့်ခွဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်၏မူဘောင်အောက်တွင်ထောက်ခံခဲ့သည် MSIP ၏အခြေခံသုတေသနအစီအစဉ် (2031-415) ။ SKP Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အပေါ်သုတေသနများအတွက် 2004 နှင့် 2006 အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုလက်ခံရရှိသူ (NARSAD) လူငယ်သုတေသနဆုပေးပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
Dopamine အချက်ပြမော်တာညှိနှိုင်း, ခံစားချက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ယန္တရားများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် . ကျောရိုးရှိအတွက် dopamine အချက်ပြ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းရွေးချယ် dopamine receptors ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ဖော်ပြနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှအဓိကအား dopaminergic input ကိုခံယူသော striatal အလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs) ကကြိုးပမ်းခဲ့တယ်နှင့် substantia nigra (SN ဖြစ်ပါတယ်) ။ Dopamine receptors ခုနစ်ခု transmembrane domains များနှင့်အတူ, G ပရိုတိန်း-coupled receptors (GPCR) ဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးကို Subtype ထားရှိရေး, dopamine အချက်ပြအတွက်အပြန်အလှန်လုပ်ရပ်များဖျန်ဖြေကြောင်း D1 တူသောနှင့် D2 ကဲ့သို့ receptors, . ဥပမာအားဖြင့်, dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors (D1, D5), G မှတဆင့် adenylyl cyclase ကိုသက်ဝင်αs နှင့်စခန်းများ၏ intracellular အဆင့်တိုးမြှင့်, ဒါပေမယ့် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors (D2, D3, D4), G မှတဆင့် adenylyl cyclase တားစီးαi နှင့်စခန်းများ၏ intracellular အဆင့်ကိုလျော့ကျ , .
dopamine receptors များထဲတွင်သည် D2 အဲဒီ receptor (DRD2) schizophrenia နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအပါအဝင်မျိုးစုံအဓိကစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ pathophysiology ်ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ် များစွာသော antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း DRD2 ပစ်မှတ်ထားကြောင်းထိုကဲ့သို့သော။ ဒါဟာအစ DRD2 လှုပ်ရှားမှုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူကောင်းစွာဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းလူသိများသည် ။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့်စိတ်ဓါတ်များ stabilizer ထိရောက်မှုလည်းဆဲလ်မျက်နှာပြင် DRD2 ၏စကားရပ်သို့မဟုတ် PKA, ERK နှင့် GSK3 ကကမကထပြုခဲ့မြစ်အောက်ပိုင်း intracellular အချက်ပြမြားတှငျပွောငျးလဲချိတ်ဆက်ပြီ , , ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ DRD2 ဤအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနေသော်လည်း DRD2 ဂုဏ်သတ္တိများမှပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနှင့်ရှုပ်ထွေးအပ်နှင်းသောအသေးစိတ်စည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများလုံးဝနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်။
သက်သေအထောက်အထားများ၏ဆုံလိုင်းများမျိုးစုံ posttranslational ပြုပြင်မွမ်းမံ DRD2 လှုပ်ရှားမှု၏ဒဏ်ငွေ-tuning အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ DRD2 ၏ကျယ်ပြန့် glycosylation အစောပိုင်း Photo-ဆှဖှေဲ့တံဆိပ်ကပ်ခြင်းလေ့လာမှုများထင်ရှားခဲ့သည် နှင့် DRD2 အတွင်း disulfide နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးကိုလည်း binding ligand များအတွက်အရေးပါသောပြုပြင်မွမ်းမံအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် ။ ထို့အပွငျ DRD2 ၏ phosphorylation က်ဘ်ဆိုက်များကနဦးအားဖြင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ စသည်တို့အတွက် အမျိုးမျိုးသော kinases ကကမကထပြုခဲ့အမျိုးမျိုးသောစည်းမျဉ်းလမ်းကြောင်းများအတွက်လမ်းကြောင်းပေး radioisotopes နှင့်အတူ assay, ။ အမှန်မှာပရိုတိန်း kinase ကို C (PKC) intracellular ကယ်လစီယမ်၏ DRD2-mediated စည်းရုံးခြင်းထိန်းညှိခြင်းနှင့် cytoskeletal ပရိုတိန်းနှင့်အတူ DRD2 များ၏အပြန်အလှန် modulates ။ GPCR kinase2(GRK2) က Phosphorylation DRD2 ၏ agonist-သွေးဆောင် resensitization ပုံစံများကိုထိန်းညှိ .
Cyclin-မှီခို kinase5(Cdk5) ကြောင့်ယင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုကဦးနှောက်-တိကျတဲ့စကားရပ်မှဦးစားပေးလုပ်ဆောင်မှုရှိပါတယ်တဲ့ proline-ညွှန်ကြား serine / threonine kinase ဖြစ်ပါသည်, p35 နှင့် p39 ။ Cdk5 အာရုံခံရွှေ့ပြောင်းနှင့် axon လမ်းညွှန်မှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအာရုံခံလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည် ဖြစ်. , Cdk5 နှင့် p35 တရားမဝင်သောကြွက် cortical အလွှာတွင်ချို့ယွင်းချက်ကိုပြသ ။ မကြာသေးမီကပြုလုပ် Cdk1 အားဖြင့် WAVE5 ၏ phosphorylation နှင့် ephexin dendritic ကျောရိုး morphogenesis စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပြသခဲ့သည် ။ ထို့အပွငျ Cdk5 ကိုလည်းမျက်နှာပြင်စကားရပ် NMDA အဲဒီ receptor ၏အဆင့်ဆင့်, NR2B နှင့် NR2A-mediated NMDA ရေစီးကြောင်းကိုထိန်းညှိ , ။ ဒါဟာသက်သေအထောက်အထားများစွာအပိုင်းပိုင်း Cdk5 နှင့် dopamine သည့်စနစ်အကြားတစ်ဦးရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးအကြံပြုကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Cdk5 က၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းညှိ, tyrosine hydroxylase (TH) phosphorylates နှင့်အရှင် dopaminergic homeostasis ထိန်းသိမ်းခြင်း ။ dopamine နဲ့သိသိ-amp စညျးမဉျြးစညျးကမျး phosphoprotein-75kD (DARPP-32) ၏ T32 ကျန်ကြွင်း Cdk5 အားဖြင့် phosphorylated သောအခါ postsynaptic အာရုံခံခုနှစ်တွင်ပြုလုပ် PKA လှုပ်ရှားမှုတားစီးနှင့်အရှင် dopamine DRD1-mediated PKA အချက်ပြဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနိုင်ပါတယ် . စိတ်ဝင်စားစရာကင်း, dopamine receptors တစ်ခုသွယ်ဝိုက် agonist, ကြွက်, mRNA နှင့်အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် Cdk5 တိုး၏ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်နာတာရှည်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသောအခါ . စုပေါင်း, Cdk5 မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ပုံရသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့နောက်ထပ် dopamine အချက်ပြအတွက် Cdk2 ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတိုးချဲ့ DRD5 နှင့် Cdk5 တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြန်အလှန်ပြသပါ။
anti-ယုန်သွေးရည်ကြည် DRD321 (D321i2) ၏တတိယ intracellular ကွင်းဆက်၏ phospho-serine2(pS3) ပါဝင်တဲ့ peptides ဆန့်ကျင်ထမြောက်ကြသည်။ Phospho-peptide, CNPDpSPAKPEK (PEPTRON), ဆှဖှေဲ့သန့်စင် (20401, Pierce) အတွက်တစ်ဦး peptide-conjugation ကော်လံစေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ anti-pS321 antibody ကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအောက်ပါတစ်ခုဆှဖှေဲ့သန့်စင်စနစ်ဖြင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခဲ့သည်။ သန့် phospho-antibody ကို 0.1% ဆိုဒီယမ် azide နှင့် 0.1% gelatin နှင့်အတူ PBS ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့သည်။ anti-mouse ကိုဆန့်ကျင် Cdk5 antibody ကို (SC-249) နှင့်ဆန့်ကျင်ယုန် Anti-p35 antibody ကို (SC-820) Cdk5 / p35 ၏အနောက်တိုင်းချေနှင့် immunocytochemistry များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ anti-mouse ကိုဆန့်ကျင် GFP antibody ကို (SC-9996) DRD2-GFP ၏ immunoprecipitative နှင့်အနောက်တိုင်းချေအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ anti-ယုန် Anti-အလံ antibody ကို (SC-807), Anti-ယုန် Anti-HA antibody ကို (SC-805), Anti-mouse ကိုဆန့်ကျင် GST antibody ကို (SC-138) နှင့်ဆန့်ကျင် mouse ကိုဆန့်ကျင် GAPDH antibody ကို (sc- 32293) Santa Cruz Biotechnology ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်။
အဆိုပါ p35 နောက်ကောက် mouse ကိုဂျပန်တွင် RIKEN ဦးနှောက်သိပ္ပံအင်စတီကျုမှာဒေါက်တာ Katsuhiko Mikoshiba ကနေကြင်နာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အမူလတန်းအာရုံခံဆဲလျယဉ်ကျေးမှုအဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ genotype များအတွက် primer အစုံယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ 5'- GGTCTCCTCTTCTGTCAAGAAG, 5'-GCTCTGCTAGACACATACTGTAC နှင့် 5'- TCCATCT GCACGAGACTAGT ခဲ့ကြသည် ။ ICR ကြွက်နှင့် Sprague Dawley ကြွက်ဦးနှောက် lysate ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အားလုံးတိရစ္ဆာန်အလုပျထုံးလုပျနညျးသိပ္ပံ၏ Pohang တက္ကသိုလ်နှင့်နည်းပညာ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
တစ်ဦး pFLAG-CMV-2 plasmid အားနည်းချက်ကိုတစ်ဦး EGFP-N1 plasmid အားနည်းချက်ကိုနှင့် DRD2 (ရှည်လျားသော isoform DRD212 မှထူးခြားသောယင်း 373 နောက်ထပ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်များအပါအဝင် 29-2 အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်) ၏တတိယ intracellular ကွင်းဆက်လူ့ DRD2 ရှည်လျား isoform အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လူ့ Cdk5 တစ် pCMV-HA plasmid အားနည်းချက်ကိုအတွက်ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်လူ့ p35 တစ် pcDNA 3.1 plasmid အားနည်းချက်ကိုအတွက်ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ လူ့ Cdk5 တစ် cytomegalovirus immunocytochemistry များအတွက် dual-စကားရပ် Construction (Cdk35 / p3.1) လုပ်မယ့် pcDNA5အားနည်းချက်ကိုလူ့ p35 နှင့်အတူ (CMV) ကမကထ, အဲဒီ receptor International assay [အောက်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်35S က] -GTPγS က assay, radioligand binding assay နှင့်စခန်းအင်ဇိုင်း immunoassay binding ။
စသည်တို့အတွက် Kinase assay
အိုင်ပီ-နှင့်ဆက်စပ် စသည်တို့အတွက် kinase assay အောက်ပါအဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တဦးတည်းတပြင်လုံးကို mouse ကိုဦးနှောက်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဦးနှောက် lysates ရဖို့တစ် Dounce တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း၏3လေဖြတ်ခြင်းဖြင့် 50 mL erythrocytes lysis ကြားခံ (ELB) (8.0 MM Tris (pH ကို 250),5MM NaCl, 0.1 MM EDTA, 40% NP-20) တွင် lysed ခဲ့သည် ။ အဆိုပါ lysates, 30 မိဘို့ရေခဲပေါ်မှာနွေးထွေးစွာရှိနေပြီး sonicated နှင့် 16,000 ×မှာ centrifuged ခဲ့ကြသည် g 10 မိသည်။ အဆိုပါ supernatants တက်ကြွစွာ Cdk35 / p5 ရှုပ်ထွေးရရှိရန် Anti-ယုန် Anti-p35 antibody ကိုအတူ immunoprecipitated ခဲ့ကြသည်။ Cdk5 / p35 ရှုပ်ထွေးပြီးသန့် GST Fusion ကိုပရိုတိန်းγ- [adenosine 5'-triposphate နှင့်အတူရောနှောခဲ့သည်32: P] (NEG-502H, PerkinElmer) နှင့် kinase ကြားခံ (30 MM HEPES (pH ကို 7.2), 10 MM MgCl နွေးထွေးစွာရှိနေပြီး2အခန်းအပူချိန်မှာ 0.2 ဇအဘို့, 1 MM DTT) , ။ သန့် Cdk5 / p25 ရှုပ်ထွေးသော (14-516, Millipore) အတွက်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည် စသည်တို့အတွက် kinase assay အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့။ နမူနာတင်ကြားခံ×အဆိုပါ2တုံ့ပြန်မှုအရောအနှောထည့်သွင်းခြင်းနှင့် 100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာပြုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနမူနာထို့နောက် SDS-စာမကျြနှာမှအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်နှင့်အခြောက်ဂျယ် autoradiography အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
အရည် Chromatography (LC) -Mass Spectrometry (က MS) / က MS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
အဆိုပါ recombinant GST-D2i3 ပရိုတိန်း IP ကိုချိတ်ဆက်အောက်ပါ LC-က MS / MS အားဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည် စသည်တို့အတွက် kinase assay ။ ကျနော်တို့က X !! တွဲဖက် (ဗားရှင်းဒီဇင်ဘာ-01-2008) ကို အသုံးပြု. LC-က MS / MS အချက်အလက်များ၏ peptide ဖော်ထုတ်ခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို RAW ဒေတာဖိုင်ပထမဦးဆုံး trans ဆိုတဲ့-proteomic ပိုက်လိုင်းကို အသုံးပြု. mzXML ကူးပြောင်းခဲ့သည် (TPP; ဗားရှင်း 4.3) ။ အဆိုပါပြောင်းလဲ mzXMLs အတွက်က MS / MS Scan ဖတ်ပြီးတော့ X ကို !! တွဲဖက် အသုံးပြု. GST-D2010i07 sequence ကိုအပါအဝင် UniProt mouse ကိုပရိုတိန်း sequence ကိုဒေတာဘေ့စ (လွှတ်ပေးရန် 2_3) ဆန့်ကျင်ရှာဖွေအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသည်းခံစိတ်အပိုင်းအစအိုင်းယွန်းများအတွက်ရှေ့ပြေးအိုင်းယွန်းအဘို့အ3Da နှင့်2Da ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ trypsin ဘို့အင်ဇိုင်းတိကျတဲ့အသုံးပြုခဲ့သည်။ variable ပြုပြင်မွမ်းမံ options များ, methionine များ၏ဓာတ်တိုး (57.021 Da), cysteine ​​၏ carbamidomethylation (15.995 Da) အတွက် asparagine ၏ Hydrolysis (0.987 Da) နှင့် serine ၏ phosphorylation (79.966 Da) အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
immunoprecipitative ELB lysis ကြားခံအတွက်ဆဲလ် lysates အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ anti-GFP antibody ကိုပု lysates ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ4ဇများအတွက်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ Immunocomplexes ပရိုတိန်း-တစ်ဦးက agarose သုံးပြီးစင်ကြယ်အောင် ပြု. ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမိုးရွာသွန်းမှု 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 37 မိဘို့ SDS နမူနာတင်ကြားခံနှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးနှင့် SDS-စာမျက်နှာနှင့်အနောက်တိုင်းချေအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။
GST ဆွဲထုတ်-Down assay
သန့် GST နှင့် GST-D10i2 ၏3μg 1.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ4ဇများအတွက်ကြွက်ဦးနှောက် lysate နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ glutathione ၏ 30 μL (GSH) Sepharose 4B ပုတီး (17-0756-01, GE Healthcare) lysis ကြားခံနှင့်အတူ equilibrated -conjugated နောက်ထပ် 1 ဇဘို့ကဆက်ပြောသည်နှင့်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ ပုတီး 2,000 ×မှာ centrifugal အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်g နှင့် lysis ကြားခံ4ကြိမ်နှင့်ဆေး , ။ မိုးရွာသွန်းမှု Anti-Cdk5 နဲ့ anti-p35 ပဋိသုံးပြီးအနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
coverslips အပေါ်ယဉ် Transfected HEK 293 ဆဲလ်များနှင့် striatal အာရုံခံဖော့စဖိတ် buffered ဆား (PBS) နဲ့တစ်ကြိမ်ဆေးကြောခြင်းနှင့်4မိဘို့အအေး 30% paraformaldehyde / PBS အတွက်နှစ်မြှုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပုံသေခဲ့သည်။ မူလတန်း antibody ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းများကိုဖြေရှင်းချက် (2% မြင်းသွေးရည်ကြည်နှင့် PBS အတွက် 1% ထရီ X-100) တွင်ရောခံခဲ့ရသည်။ Alexafluor-647-conjugation Anti-mouse ကို antibody ကို (A20990, Invitrogen) နှင့် Alexafluor-568-conjugation Anti-ယုန် antibody ကို (A11011, Invitrogen) အလယ်တန်းပဋိအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Hoechst နျူကလိယအစွန်းအထင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပုံရိပ်တွေ confocal microscopy (Olympus တို့, FluoView-1000) ကရယူခဲ့ကြသည်။
receptor International assay
transfection ပြီးနောက် 24 ဇ, ဆဲလ်တွေ 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 102 မိနှင့် 30 မိဘို့ 90 μM quinpirole (Q37, Sigma) နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။ ဆဲလ်2mL အအေး PBS နှင့် 200 μL aliquots အတွက် re-ဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်တစ်ခုချင်းစီကိုတုံ့ပြန်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးကုသအောက်ပါပြင်းအားမှာ3ဇများအတွက်အခန်းအပူချိန်မှာထွက်သယ်ဆောင်ကြသည် ဟူ. ၎င်း,3nm [3H ကို] -spiperone (NET-565, PerkinElmer),3μM sulpiride (895, TOCRIS), 10 μM haloperidol (H1512, Sigma) ။ Hydrophobic [3H ကို] -spiperone စုစုပေါင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို receptors တံဆိပ်ကပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ hydrophilic sulpiride အမြှေးပါးအဲဒီ receptor-ခညျြနှောငျ [အစားထိုးအသုံးပြုခဲ့သည်3H ကို] -spiperone အချက်ပြမှုများ။ အမြှေးပါး-ဆက်စပ်အဲဒီ receptor အချက်ပြမှုများစုစုပေါင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဲဒီ receptor တန်ဖိုးများထံမှ intracellular အဲဒီ receptor တန်ဖိုးများကိုနုတ်အားဖြင့်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ ဆဲလ်တစ် gf / B က (Millipore) filter ကိုအပေါ် filtered နှင့်အဝတ်လျှော်ကြားခံ (3 MM Tris-HCl (pH ကို 50), 7.4 MM NaCl) နဲ့ 100 ကြိမ်ဆေးကြောခဲ့သည်။ စိစစ်မှုများအထဲကအခြောက်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ကျန်နေတဲ့ရေဒီယိုသတ္တုကြွတဲ့အရည် scintillation ကောင်တာကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့သည် .
transfection ပြီးနောက် 100 မီလီမီတာယဉ်ကျေးမှု-ဟင်းလျာများအတွက် Confluent ဆဲလ်တွေရေခဲ-အအေး PBS နှင့်အတူဆေးကြောခြင်းနှင့် 1 mL HME ကြားခံ (25 MM HEPES (pH ကို 7.5) တွင်ရိတ်သိမ်း,2MM MgCl ခဲ့ကြသည်2, 1 MM EDTA) ။ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း lysates 500 မိဘို့ပါ g × 15 နှင့်အတူ centrifuged ခဲ့ကြသည်နှင့် supernatants နောက်ပိုင်းတွင် 36,000 မိဘို့ပါ g × 30 နှင့်အတူ centrifuged ခဲ့ကြသည်။ လုံးလေးများ HME ကြားခံအတွက် re-ဆိုင်းငံ့ assay များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
[35S က] -GTPγS က binding assay
cell အမြှေးပါးအပိုငျးကတော့ assay ကြားခံ (1 MM HEPES (pH ကို 102) တွင် 25 μM quinpirole (Q7.5, Sigma), 1.5 MM MgCl နှင့်အတူ Pre-နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်2, 100 MM NaCl, 1 MM EDTA နှင့် 0.01 MM ဂျီဒီပီ) 10 မိသည်။ [35S က] -GTPγS က (NET-030H, PerkinElmer) နောက်ဆုံး3μLအတွက် 30 nm ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် 90 မိဘို့နောက်ထပ်ပေါက်ဖွားဖို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရေခဲ-အအေးကြားခံ၏ 170 μL (10 MM Tris-HCl (pH ကို 8.0), 100 MM NaCl, 10 MM MgCl2နှင့် 0.1 MM GTP) ကိုတုံ့ပြန်မှုရပ်တန့်ဖို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အမြှေးပါးတစ် gf / B က filter ကို (Millipore) ရက်နေ့တွင် filtered နှင့်အဝတ်လျှော်ကြားခံ (3 MM Tris-HCl (pH ကို 50), 7.4 MM NaCl) နဲ့ 100 ကြိမ်ဆေးကြောခဲ့သည်။ စိစစ်မှုများအခြောက်ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ရေဒီယိုသတ္တုကြွအဆိုပါ scintillation ကောင်တာကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့သည် , .
ပြင်ဆင်ထားဆဲလ်အမြှေးပါး [0.01 nm နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်3H ကို] -spiperone (NET-565, PerkinElmer) နှင့် assay ကြားခံအတွက် 102 မိ (30 MM HEPES (pH ကို 25), 7.5 MM MgCl များအတွက် (Q1.5, Sigma) quinpirole ၏ပြင်းအားကိုတိုးမြှင့်2, 100 MM NaCl, 1 MM EDTA) ။ အမြှေးပါးတစ် gf / B က filter ကို (Millipore) ရက်နေ့တွင် filtered နှင့်အဝတ်လျှော်ကြားခံ (3 MM Tris-HCl (pH ကို 50), 7.4 MM NaCl) နဲ့ 100 ကြိမ်ဆေးကြောခဲ့သည်။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှု gf A / C filter များမှတစ်ဆင့်လျင်မြန်စွာ filtration အားဖြင့်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ ကျန်နေတဲ့ရေဒီယိုသတ္တုကြွတဲ့အရည် scintillation ကောင်တာကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့သည် -.
Transfected HEK 293 ဆဲလ် 10 ဇများအတွက် 6520 μM rolipram (R1, Sigma) နဲ့ pretreated, ပြီးတော့ 0.1 μM forskolin (F6886, Sigma) နဲ့ကုသနှင့် 102 မိဘို့ (Q30, Sigma) quinpirole ၏ပြင်းအားကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ မူလတန်းယဉ် striatal အာရုံခံ 10 ဇများအတွက် 1 μM rolipram နဲ့ကုသနှင့် 1 ဇများအတွက်ထို့နောက် 1 μM dopamine ခဲ့ကြသည် ။ cell lysates 0.1 M က HCl နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်နှင့်စခန်းအဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအောက်ပါစခန်းအင်ဇိုင်း immunoassay ကိရိယာအစုံ (Sapphire Bioscience) ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
မူလတန်းယဉ်ကျေးမှု Striatal အာရုံခံ
Striatal ဧရိယာ mouse ကိုသန္ဓေသားဦးနှောက် (E15) မှခွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ခှဲစိတျတစ်ရှူး 11095 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 0.25 မိဘို့ 4549% trypsin (T100-0.1, Sigma) နှင့် 6% DNase ငါင်အနည်းငယ်မျှသာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမီဒီယာ (Mem) (37, Invitrogen) တွင် dissociated ခဲ့သည်။ ဆဲလ်တွေပန်းကန်မီဒီယာ (0.01 M က HEPES (pH ကို 7.4) နဲ့ Mem နှင့် 10% (vol / vol) မြင်းသွေးရည်ကြည် (16050-122, GIBCO)) အတွက် re-suspened ခဲ့ကြသည်။ အာရုံခံ7နေ့ရက်ကာလအဘို့ယဉ်ခဲ့ကြ စသည်တို့အတွက် B7 ဖြည့်စွက် (27-17504, Invitrogen) နဲ့ Mem အတွက် (div 044) စခန်းအင်ဇိုင်း immunoassays အသုံးချမခံရမီ။
DRD5 ၏တတိယ Intracellular Loop အတွက် Cdk321 Phosphorylates Serine2စသည်တို့အတွက်
ဝတ္ထု Cdk5 အလွှာကိုသိရှိနိုင်ဖို့, ကျနော်တို့ Cdk5 အသိအမှတ်ပြုမှုသဘောတူညီမှုပာအဖြစ် (S / T) ကို px (K သည် / H ကို / R) ကို အသုံးပြု. စနစ်တကျရှာဖွေမှုကိုလုပ်ဆောင်  နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအလွှာအဖြစ် DRD2 ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ serine 321 အပါအဝင်သဘောတူညီမှု sequence ကို, အမျိုးမျိုးသောစည်းမျဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီဘယ်မှာ DRD2 (D2i3) ၏တတိယ intracellular ကွင်းဆက်တွင်တည်ရှိသည် , , ။ အဆိုပါ sequence ကို evolutionarily (ကျန်ကြွင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုခဲ့ရသည်, ကျောရိုးရှိအတွက် DRD2 အတွက်ထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်သင်္ဘောသဖန်း။ 1A).
ပုံ 1 ။ Cdk5 DRD321 ၏တတိယ intracellular ကွင်းဆက်အတွက် serine2phosphorylates စသည်တို့ဖြစ်သည်။
(က) အမျိုးမျိုးသောမျိုးစိတ် (shaded) ကနေ DRD2 ၏ရှေးရိုးစွဲဒေသများဖေါ်ပြခြင်းအမိုင်နိုအက်ဆစ် sequence ကို alignment ကို။ အလားအလာ Cdk5 phosphorylation site ကိုတစ်ခရေပွင့အားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်။ (ခ) IP ကို-နှင့်ဆက်စပ် စသည်တို့အတွက် recombinant GST-D2i3 နှင့် GST-D2i3 Mutant ပရိုတိန်းနှင့်အတူ kinase assay ။ Anti-p5 immunoprecipitative အားဖြင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထုတ်ယူထံမှကြွယ်ဝပြည့်စုံ Cdk35 / p35 ရှုပ်ထွေး kinase တုံ့ပြန်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ phosphorylated ပရိုတိန်းတစ်ခု autoradiograph အတူတူဂျယ်၏ Coomassie တောက်ပအပြာရောင်အစွန်းအထင်းတွေနဲ့အတူပြသနေသည်။ Arrowhead GST-D2i3s မှသက်ဆိုင်ရာရေဒီယိုသတ္တိကြွ signal ကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်ပွင့်လင်း arrowhead p35 ကနေရေဒီယိုသတ္တိကြွအချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြသည်။ (ဂ) D2i3 ၏ phosphorylated peptide အပိုင်းအစ၏က MS / MS ရောင်စဉ်။ အဆိုပါသီအိုရီအကွဲကွဲအပြားပြားပုံစံများဟာရောင်စဉ်ကိုအောက်တွင်ပြသထားပါသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အပိုင်းအစအိုင်းယွန်းများထဲတွင်အဆိုပါတွေ့ရှိ Y- နှင့် b-အိုင်းယွန်းဟာရောင်စဉ်တန်းများကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်နေကြသည်။ အဆိုပါ y က6 နှင့် y က7 အိုင်းယွန်းပြင်းပြင်းထန်ထန် serine 321 ၏ phosphorylation ဖော်ပြသည်။ (ဃ) စသည်တို့အတွက် GST-D5i25 နှင့် GST-D2i3 Mutant ပရိုတိန်းကိုအသုံးပြုပြီးသန့် Cdk2 / GST-p3 နှင့်အတူ kinase assay ရှုပ်ထွေး။ Phosphorylated ပရိုတိန်း Coomassie တောက်ပအပြာရောင်အစွန်းအထင်းများနှင့်အတူတစ်ဦး autoradiograph မှာပြခဲ့ကြသည်။ Arrowhead GST-D2i3 နှင့်ပွင့်လင်း arrowhead သက်ဆိုင်ရာရေဒီယိုသတ္တိကြွ signal ကို GST-p25 ကနေရေဒီယိုသတ္တိကြွအချက်ပြမှုများကိုညွှန်ပြဖော်ပြသည်။
D5i2 phosphorylate မှ Cdk3 များ၏စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကျနော်တို့ IP ကိုချိတ်ဆက်ဖျော်ဖြေ စသည်တို့အတွက် သန့် recombinant GST-D5i35 (အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန် 35-2) နဲ့ p3 immunoprecipitative အားဖြင့်ကြွက်ဦးနှောက် lysate ထံမှကြွယ်ဝပြည့်စုံတက်ကြွစွာ Cdk212 / p373 ရှုပ်ထွေးသုံးပြီး kinase assay ယင်းအလွှာဟာအဖြစ်ပရိုတိန်း။ ကျနော်တို့ကို (သန့် GST-D2i3 နှင့် GST-D2i3 S297A ပရိုတိန်းအတွက် phosphorylation အချက်ပြမှုများကိုလေ့လာတွေ့ရှိပေမယ့် signal ကိုသိသိသာသာ GST-D2i3 S321A သုံးပြီးလျော့ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 1B) ။ နောက်ထပ် GST-D321i2 အတွက် serine3၏ phosphorylation အတည်ပြုရန်ကျနော်တို့ IP ကိုချိတ်ဆက်ထံမှနမူနာ LC-က MS / MS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေ စသည်တို့အတွက် LTQ XL အစုလိုက်အပြုံလိုက် spectrometry သုံးပြီး kinase assay ။ တသမတ်တည်း, phospho-serine 321 peptides ၏ဒြပ်ထုမှသက်ဆိုင်ရာ phospho-peptides ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည် (သင်္ဘောသဖန်း။ 1C) ။ LC-က MS / MS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်းဒေတာ-မှီခိုဝယ်ယူနမူနာများတွင်ပေါများပရိုတိန်း detect လုပ်ဖို့လေ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား , ဒီဒေတာ serine 321 ကျန်ကြွင်းပု D5i2 ဒေသတွင်း၌ Cdk3 များ၏ကြီးစိုး phosphorylation site ကိုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ Cdk321 အားဖြင့် GST-D2i3 အတွက် serine5တိုက်ရိုက် phosphorylation သက်သေပြရန်အတွက်, စသည်တို့အတွက် သန့် recombinant GST-D5i25 ပရိုတိန်းနှင့်အတူသန့် Cdk2 / GST-p3 ရှုပ်ထွေးသုံးပြီး kinase assay ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကို (GST-D2i3 S2A အတွက်ပျက်ကွက်ခဲ့သော GST-D3i321 အတွက်သိသာထင်ရှားသော phosphorylation signal ကိုဖော်ထုတ်သင်္ဘောသဖန်း။ 1D) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤရလဒ်များ D2i3 S321 ကျန်ကြွင်း Cdk5-mediated phosphorylation များအတွက်ဦးစားပေးပစ်မှတ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
ဆဲလ်ထဲမှာ DRD5 ၏တတိယ Intracellular Loop အတွက် Cdk321 Phosphorylates Serine 2
serine 321 ၏ phosphorylation ကိုသိရှိနိုင်ဖို့, ငါတို့ phospho-serine 321 (pS321) အတွက်တိကျသော antibody ကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏။ ယင်း IP ကိုချိတ်ဆက်ထံမှနမူနာ စသည်တို့အတွက် kinase assay Anti-pS321 antibody ကို အသုံးပြု. အနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ချေ GST-D2i3 (အပေါ်မှီခိုသော kinase တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားတီးဝိုင်းပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 2A) ။ HEK 321 ကနေဆန့်ကျင် GFP immunoprecipitative, ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ Cdk2 အားဖြင့် DRD5 အတွက် serine 293 ၏အလားအလာ phosphorylation အတည်ပြုရန် DRD2-GFP နှင့် HA-Cdk2 နှင့် p321 နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ DRD5 S35A-GFP ဖော်ပြဆဲလ်တွေ Anti-GFP သုံးပြီးအနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်နှင့် Anti-pS321 ပဋိ။ DRD2 အလွန်အကျွံ glycosylation ကြောင့်ဖြစ်လူသိများကြသည် Anti-GFP antibody ကိုတို့ကဝိသေသလူးတီးဝိုင်းအချက်ပြမှုများကိုသာ DRD2-GFP ၏ရှေ့တော်၌စောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြပြီး, Anti-pS321 antibody ကိုသာ Cdk2 / p5 ပူးတွဲစကားရပ် (နဲ့အတူအလားတူ DRD35 အချက်ပြမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 2B) ။ နောက်ထပ် Cdk321, D5i2 (Flag-D3i2) နှင့် D3i2 ၏ Mutant ပုံစံ (Flag-D3i2 S3A) က serine 321 ၏ phosphorylation အတည်ပြုရန်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ Flag-D2i3 နှင့်အလံ-D2i3 S321A ဆဲလ်တစ်ခု SDS-ဂျယ် mobility ပြောင်းကုန်ပြီ assay အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် HEK5အတွက် HA-Cdk35 နှင့် p293 နှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ တစ်ဦးကသိသိသာသာ Cdk5-မှီခို mobility ပြောင်းကုန်ပြီ (Flag-D2i3 အဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်အလံ-D2i3 S321A များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်း။ 2C) ။ ငါတို့သည်လည်း agonist ဆွအပေါ်သို့ Ser2 မှာ DRD321 ၏ phosphorylation အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်။ DRD293-GFP နှင့် Cdk2 / p5 ရှုပ်ထွေးဖော်ပြ HEK 35 ဆဲလ် quinpirole ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွပေးခဲ့သည်, နှင့်ဆဲလ် lysates ကနေဆန့်ကျင် GFP immunoprecipitative Anti-GFP နဲ့ anti-pS321 ပဋိသုံးပြီးအနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ (GRK- နှင့် PKC-mediated phosphorylations ထံမှကွဲပြားခြားနားပုံပေါ်သော Ser5 မှာ DRD2 ၏ Cdk321-mediated phosphorylation agonist ဆွနေဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 2D) , ။ အတူတကွဤရလဒ်များကို Cdk5 ဆယ်လူလာပတ်ဝန်းကျင်တွင် DRD321 ၏ serine2ကျန်ကြွင်း phosphorylate နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ။
ပုံ2။ Cdk5 ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ DRD321 ၏တတိယ intracellular ကွင်းဆက်အတွက် serine2phosphorylates ။
serine5၏ Cdk321-mediated phosphorylation Anti-pS321 antibody ကိုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ IP ကိုချိတ်ဆက်ထံမှ (က) နမူနာ စသည်တို့အတွက် GST-D2i3 ပရိုတိန်းကို အသုံးပြု. kinase assay ညွှန်ပဋိနှင့်အတူ (WB) blotting အနောက်တိုင်းအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ Arrowheads GST-D2i3s ဖော်ပြသည်။ (ခ) DRD2-GFP နှင့် DRD2 S321A-GFP HEK5ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ HA-Cdk35 နှင့် p293 နှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ anti-GFP immunoprecipitative Anti-GFP နဲ့ anti-pS321 ပဋိသုံးပြီးအနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ bracket က DRD2 အချက်ပြမှုများကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်ပွင့်လင်း arrowhead anti-GFP immunoprecipitative ထံမှ nonspecific အချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြသည်။ '% input ကို' 'တစ်ဦး IP ကိုတုံ့ပြန်မှုများအတွက်စုစုပေါင်း lysate ၏% အသံအတိုးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်း endogenous Cdk5 အချက်ပြမှုများနေရာတွေမှာကြယ်ပွခွငျးအားဖွငျ့ညွှန်ပြခဲ့သည်။ (ဂ) Gel mobility ပြောင်းကုန်ပြီ assay ။ ညွှန်ပြအဖြစ် transfected HEK 293 ဆဲလ်အနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ (ဃ) Transfected HEK 293 ဆဲလ် quinpirole နဲ့ anti-GFP immunoprecipitative နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည် Anti-GFP နဲ့ anti-pS321 ပဋိနှင့်အတူအနောက်တိုင်းချေအားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ပွင့်လင်း arrowhead Anti-GFP immunoprecipitative ထံမှ nonspecific အချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြသည်။
Cdk5 / p35 Complex နှင့် DRD2 ကိုယ်ထိလက်ရောက် Associated များမှာ
အများအပြား Cdk5 အလွှာဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cdk35 / p2 ရှုပ်ထွေးနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ Cdk5 / p5 ရှုပ်ထွေးပြီး DRD35 အကြားအလားအလာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်စုံစမ်းစစ်ဆေး , , ။ ပထမဦးစွာ GST ဆွဲ-Down စမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သန့် recombinant GST-D2i3 ပရိုတိန်းကြွက်ဦးနှောက် lysate နှင့် GST ဆွဲ-Down မိုးရွာသွန်းမှုအနောက်တိုင်းချေဘို့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့သည်။ မှာပြထားတဲ့အတိုင်း သင်္ဘောသဖန်း။ 3A, endogenous Cdk5 နှင့် p35 (ရှုပ်ထွေးသော DRD2 နှင့် Cdk5 / p35 အကြားတစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ညွှန်ပြခြင်း, ဆွဲ-Down မိုးရွာသွန်းမှုအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသင်္ဘောသဖန်း။ 3A) ။ ထိုမှတပါး, HA-Cdk5 နှင့် p35 DRD293-GFP နှင့် Cdk2 / p5 (ဖော်ပြ HEK 35 ဆဲလ် lysates ကနေဆန့်ကျင် GFP immunoprecipitative တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 3B) ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ immunocytochemical ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် DRD2-GFP, HA-Cdk5 နှင့် p35 HEK 293 ဆဲလ် (များ၏အမြှေးပါးဧရိယာမှာသိသိသာသာ Co-မူပြောင်းခြင်းအချက်ပြမှုများကိုပြသသောလေ့လာတွေ့ရှိသင်္ဘောသဖန်း။ 3Cအထက်ပိုင်းပြား) ။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအာရုံခံအခြေအနေတွင် DRD2 နှင့် Cdk5 / p35 ပူးတွဲ-local စုံစမ်းစစ်ဆေး။ တသမတ်တည်း, DRD2-GFP ကိုလည်းထပ်မံ DRD5 နှင့် Cdk35 / p7 (အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့လင့်များ supporting, ယဉ်ကျေးမှု striatal အာရုံခံ (DIV2) တွင် endogenous Cdk5 နှင့် p35 နှင့်အတူသိသာ Co-မူပြောင်းခြင်းပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 3C, အောက်ခြေပြား) ။ ရလဒ် DRD2 နှင့် Cdk5 / p35 ရှုပ်ထွေးပြီးဖွဲ့စည်းရန်နှင့်အရှင်, DRD2 Cdk5 တစ်ဦးဇီဝကမ္မအလွှာကြောင်းအယူအဆထောကျပံ့ပေးနိုငျကွောငျးဖော်ပြသည်။
ပုံ3။ Cdk5 / p35 DRD2 နဲ့ရှုပ်ထွေးဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။
(က) GST ဆွဲ-Down assay ကြွက်ဦးနှောက်ထုတ်ယူနဲ့အတူသန့် recombinant GST-D2i3 ပရိုတိန်းကိုသုံးနိုင်သည်။ GST ဆွဲ-Down မိုးရွာသွန်းမှုအနောက်တိုင်းချေဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ '' ပုတီးစေ့ '' GST ပရိုတိန်းမပါဘဲဆွဲ-Down မိုးရွာသွန်းမှုဖော်ပြသည်။ (ခ) DRD2 ၏ immunoprecipitative နှင့် Cdk5 / p35 ရှုပ်ထွေး။ transfected ဆဲလ်ကနေ lysates ထံမှ anti-GFP IP ကိုအနောက်တိုင်းချေဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ bracket က DRD2 အချက်ပြမှုများကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်ပွင့်လင်း arrowhead anti-GFP immunoprecipitative ထံမှ nonspecific အချက်ပြမှုများကိုဖော်ပြသည်။ သွင်းအားစုများအတွက် overexposed ချေကိုလည်းလက်ျာဘက်၌အပြထားပါသည်။ (ဂ) Immunocytochemical DRD2 နှင့် Cdk5 / p35 ၏လေ့လာဆန်းစစ်။ DRD293-GFP နှင့် Cdk2 / p5 ဖော်ပြ HEK 35 ဆဲလ်တွေ Anti-Cdk5 နဲ့ anti-p35 ပဋိ (အထက်ပြား) နဲ့စွန်းထင်းခဲ့ရသည်။ DRD2-GFP ယဉ်ကျေးမှု striatal အာရုံခံအတွက်တစ်ဦးတည်းရှိပါကြောင်းနှင့်ဆန့်ကျင် Cdk5 နဲ့ anti-p35 ပဋိ (အောက်ပိုင်းပြား) နဲ့စွန်းထင်းခဲ့ရသည်။ Hoechst နျူကလိယအစွန်းအထင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစကေးဘား5μmဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပုံရိပ်တွေ confocal microscopy (Olympus တို့, FluoView-1000) ကို အသုံးပြု. ရယူခဲ့ကြသည်။
DRD5 attenuation receptor လှုပ်ရှားမှု၏ Cdk2-mediated Phosphorylation
ဒါဟာ phosphorylation ထိုကဲ့သို့သော, G ပရိုတိန်းနားချင်းဆက်မှီ, အဲဒီ receptor International, intracellular ဒေသခံများနှင့် modulator တွေကိုပရိုတိန်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အဖြစ် GPCRs ဝေဖန်ဂုဏ်သတ္တိများ modulates ကြောင်းအစီရင်ခံထားသည် , , ။ တစ်ဦးကgonist-သွေးဆောင်အဲဒီ receptor International signal ကို transduction ၏အရေးပါသောစည်းမျဉ်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ DRD5 International ၏ Cdk2-mediated မော်ဂျူစုံစမ်းစစ်ဆေး။ Cdk293 / p2 နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ DRD2-GFP နှင့် DRD321 S5A-GFP ဖော်ပြ HEK 35 ဆဲလ် (agonist-နှိုးဆွ DRD1 International သွေးဆောင်2μM quinpirole နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 4A) ။ [3H ကို] DRD2-GFP ဖော်ပြဆဲလ် -spiperone အချက်ပြမှုများကိုသိသိသာသာ 30 မှာလျှော့ချခဲ့သည် quinpirole ကုသမှု MIN နှင့် 90 မိမှာရပြန်လေ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာ [3H ကို] ဆဲလ်ဖော်ပြ DRD2-GFP နှင့် Cdk5 / p35 ၏ -spiperone အချက်ပြမှုများလည်း 30 မှာလျှော့ချခဲ့သည် (quinpirole ကုသမှု MIN ပေမယ် 90 မိမှာပြန်လည်ကောင်းမွန်မဟုတ်သင်္ဘောသဖန်း။ 4Aဒုတိယအပိုင်း) ။ သို့သော်ငြားလည်း, [3H ကို] DRD2 S321A-GFP ဖော်ပြဆဲလ် -spiperone အချက်ပြမှုများ 30 မိမှာပါလျှော့ချခဲ့ကြခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင် Cdk90 / p5 နှင့်အတူပူးတွဲစကားရပ်၏, 35 မိမှာရပြန်လေ၏။ ယခင်လေ့လာမှုများ internalized DRD2 ကြာရှည် agonist ဆွပေါ်မှာပလာစမာအမြှေးပါးကိုပြန်ပြန်လည်ကြောင်းပြသကြ ။ T ကHUS က DRD5 ၏ Cdk2-mediated phosphorylation agonist-သွေးဆောင် DRD2 International အောက်ပါ resensitization လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းပေါ်လာသည်။
ပုံ4။ Cdk5-mediated phosphorylation DRD2 မျက်နှာပြင်စကားရပ်နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြ attenuates ။
[ဖြင့်တိုင်းတာ (A) ကို DRD2 မျက်နှာပြင်စကားရပ်3H ကို] binding assay -spiperone ။ Transfected HEK293 ဆဲလ် [ညွှန်ပြချက်အချိန်များအတွက် 1 μM quinpirole နှင့်အတူနှိုးဆွခြင်းနှင့်ရိတ်သိမ်း,3nm အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်33 ဇအဘို့အ H] -spiperone ကုသမှု။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုကိုတိုင်းတာပြီးမျက်နှာပြင်အချက်ပြများကိုတွက်ချက်သည်။ အမှားဘားဆိုလို±± SE ကိုကိုယ်စားပြု (n = 8; * p <0.05, ** p <0.01; Dunnett post ကို hoc စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူတစ်လမ်း ANOVA: ထိန်းချုပ်မှုကော်လံ vs. အားလုံးကော်လံနှိုင်းယှဉ်) ။ (ခ)35S က] -GTPγassay binding S ။ ဆဲလ်အမြှေးပါးညွှန်ပြအဖြစ် transfected ဆဲလ်ကနေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ အမြှေးပါးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ [1 nm အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်3μM quinpirole နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်35S က] -GTPγမိနစ် 90 အဘို့အ S ။ အမှားဘားဆိုလို±± SE ကိုယ်စားပြု (n = 8; * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001; Bonferroni post ကို hoc စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူတစ်လမ်း ANOVA: ကော်လံအားလုံးအားလုံးအတွက်နှိုင်းယှဉ်) ။ (ဂ) Quinpirole- ယှဉ်ပြိုင် [3H ကို] binding assay -spiperone ။ transfected ဆဲလ်ကနေအမြှေးပါးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု 0.01 nm နှင့်အတူနွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည် [3H] -siperiperone နှင့် quinpirole သည် ၃၀ မိနစ်မျှတိုးပွားစေသည်။ Non-linear ဆုတ်ယုတ် GraphPad အားဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။ အမှားဘားယုတ်± SE (n = 30) ယုတ်ဖော်ပြသည်။ ()) transfected HEK3ဆဲလ်တွေမှာ cAMP အင်ဇိုင်း immunoassays ။ transfected ဆဲလ် 293 နာရီ 10 μM rolipram နှင့်အတူ pretreated နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် 1 μM forskolin နှင့်အတူပူးတွဲကုသနှင့် 0.1 မိနစ် quinpirole ၏ပြင်းအားတိုးပွားလာခဲ့သည်။ Non-linear ဆုတ်ယုတ် GraphPad အားဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။ ချို့ယွင်းချက်ဘားများသည်±± SE (n = 30; ** p <4; Two-tail) t-tests) ။ (E) နဲ့ရိုင်းအမျိုးအစားနှင့် p35 နောက်ကောက်သန္ဓေသား (div 7) မှယဉ်ကျေးမှု striatal အာရုံခံ 10 ဇများအတွက် 1 μM dopamine အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 1 ဇများအတွက် 1 μM rolipram နဲ့ကုသခံခဲ့ရသည်။ **; မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင်± SE (ဎ =4ဆိုလိုကိုယ်စားပြုp<0.01; Two-tailed t-tests) ။
ကျနော်တို့နောက်ထပ် [သုံးပြီး Cdk2-mediated phosphorylation နှင့်ဆက်စပ် DRD5 မှ agonist-နှိုးဆွပေး, G ပရိုတိန်းနားချင်းဆက်မှီတဲ့အလားအလာပြောင်းလဲမှုအကဲဖြတ်35S က] -GTPγS က binding assay , ။ Cdk2 / p2 နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ DRD321-GFP နှင့် DRD5 S35A-GFP HEK 293 ဆဲလ်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အမြှေးပါး [ပွငျဆငျနှင့်နှိုးဆွ 1 μM quinpirole နှင့်ထပ်မံခွင့်ပြုခဲ့သည်35S က] -GTPγS ကပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ဆဲလ်အမြှေးပါးဖော်ပြ DRD2-GFP နှင့် Cdk5 / p35 [သိသိသာသာချို့ယွင်းပြသ35S က] -GTPγS ကအပေါငျးတို့သညျအခွားဆဲလ်အမြှေးပါးနဲ့နှိုင်းယှဉ် binding (သင်္ဘောသဖန်း။ 4B) ။ ဤရလဒ်သည် Cdk5-mediated phosphorylation DRD2 မှာခညျြနှော agonist-နှိုးဆွပေး, G ပရိုတင်းကိုဆင်း-ထိန်းညှိကဖော်ပြသည်။
ထို့အပြင် quinpirole-ယှဉ်ပြိုင် [3H ကို] binding assay Cdk2-mediated phosphorylation အားဖြင့် DRD5 မှာ agonist-ဆှဖှေဲ့အတွက်မဆိုအလားအလာပြောင်းလဲမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည် -spiperone ။ [၏ယှဉ်ပြိုင်မှုစည်းနှောင်3transfected ထံမှအမြှေးပါးပြင်ဆင်မှုမှ quinpirole ၏ပြင်းအားကိုတိုးမြှင့်ကုသအပေါ်သို့ H ကို] -spiperone တိုင်းတာခဲ့သည်။ quinpirole ၏စည်းနှောင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့် [3DRD2-GFP နှင့် DRD2 S321A-GFP မှာ H ကို] -spiperone အလားတူ logK လုပ်i တန်ဖိုးများ (DRD9.789-GFP များအတွက် -2; DRD9.691 S2A-GFP များအတွက် -321), DRD2 မှ ligand ၏ဆှဖှေဲ့သိသိသာသာ DRD5 မှာ Cdk2-mediated phosphorylation အားဖြင့်မထိခိုက်ကြောင်းညွှန်ပြ (သင်္ဘောသဖန်း။ 4C).
Cdk5-mediated Phosphorylation အဆိုပါ DRD2-Camp signal Pathway Down-ထိန်းညှိ
Next ကိုကျနော်တို့ Cdk2 အားဖြင့် DRD5 ၏ပြုပြင်မွမ်းမံမြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့စခန်းအင်ဇိုင်း immunoassay သုံးပြီး DRD2-GFP နှင့် DRD2 S2A-GFP ဖော်ပြဆဲလ်ထဲမှာ adenylyl cyclase အားဖြင့် forskolin-နှိုးဆွစခန်းထုတ်လုပ်မှု၏ DRD321-mediated တားစီးစောင့်ကြည့်။ ပြသ DRD2-ဖော်ပြဆဲလ်တစ်ထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ quinpirole တုံ့ပြန်စခန်းအဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့လေ၏။ ထူးခြား, Cdk5 / p35 ၏ Co-expression ကိုသိသိသာသာစခန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏အကျယ်ချဲ့တားစီးလျှော့ချ (သင်္ဘောသဖန်း။ 4D, လက်ဝဲ panel က) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ DRD2 S321A-GFP ဖော်ပြဆဲလ်တွေအတွက်, တပ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုထိထိရောက်ရောက် (မသက်ဆိုင် Cdk5 / p35 ၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကုသမှု quinpirole တုံ့ပြန် inhibited ခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်း။ 4D, ညာဘက် panel က) ။ ဤရလဒ်သည် DRD5 ၏ Cdk2-mediated phosphorylation အဆိုပါမြစ်အောက်ပိုင်းစခန်းအချက်ပြလမ်းကြောင်းအပေါ် DRD2 ၏ inhibitory လှုပ်ရှားမှု attenuates ကဖော်ပြသည်။ နောက်ထပ်တစ်ဦးထက်ပိုဇီဝကမ္မသက်ဆိုင်ရာ setting ကိုအတွက်ဖြစ်ရပ်အတည်ပြုပေးရန်, ငါတို့ p35 တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ် Cdk5 လှုပ်ရှားမှုများတွင်လစ်လပ်သန္ဓေသားနောက်ကောက်ကနေမူလတန်းယဉ်အာရုံခံ၏အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မူလတန်း 1 μM dopamine နဲ့ကုသနှင့်စခန်းအင်ဇိုင်း immunoassay အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် striatal အာရုံခံ cultured ။ dopamine နှင့်အတူနှိုးဆွပေးသည့်အခါ p35 နောက်ကောက်ကြွက်တွေကနေအာရုံခံ (ရိုင်း-type အမျိုးအစားတွင် neuron နှိုင်းယှဉ်လျှော့ချစခန်းအဆင့်ဆင့်ပြသသင်္ဘောသဖန်း။ 4E) ။ T ကအတူတူ aken ကျနော်တို့ DRD5 နေဖြင့်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်တပ်ကိုလမ်းကြောင်းအပေါ် inhibitory သေံအတွက်ကျဆင်းခြင်းအတွက် DRD2 ရလဒ်များ Cdk2-mediated ကြောင်း phosphorylation ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ Cdk2 တစ်ဝတ္ထုအလွှာအဖြစ် DRD5 ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ phosphorylation အားဖြင့် DRD2, G လျှော့ချအဲဒီ receptor International အောက်ပါ DRD2 ၏ကံကြမ္မာထိခိုက်ခြင်းဖြင့် DRD2 မျက်နှာပြင်စကားရပ်ကိုဆင်း-ထိန်းညှိပုံiစခန်းလမ်းကြောင်း -coupling နှင့်မြစ်အောက်ပိုင်း။ အဆိုပါ phosphorylation ကျန်ကြွင်း S321 DRD2 ရှည်လျားတိုတောင်း isoforms အတွက်နှစ်ဦးစလုံးတည်ရှိသကဲ့သို့, ဒီလေ့လာမှုမှာအဆိုပြုထားသည့်ယန္တရား DRD2-mediated အချက်ပြအတွက်စည်းမျဉ်း၏အထွေထွေ mode ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ.
အလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက် DRD2 အဓိက dopamine အဲဒီ receptor မျိုးကွဲအဖြစ်မှတ်ထားပြီးမသာပေမယ့်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ရရှိနိုင်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုရန်၎င်း၏လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဘို့အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ DRD2 ၏ Agonist-သွေးဆောင် desensitization နှင့် resensitization ကျယ်ကျယ်လေ့လာခဲ့ကြပြီ , . အထူးသဖြင့်, လေ့လာမှုများတစ်အရေအတွက် striatal synapses အတွက် dopamine ၏ extracellular အဆင့်မြှင့်သည့်ထိုကဲ့သို့သောကင်းနဲ့စိတ်ကြွဆေးအဖြစ်နာတာရှည် psychostimulant ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများ, DRD2 postsynaptically ၏ပြောင်းလဲနေသောအပြောင်းအလဲများဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်ဟုပြသကြ . အမှန်မှာနာတာရှည်ကင်းအသုံးပြုသူများ striatal ဧရိယာ၌ DRD2 အဆင့်ဆင့်လျှော့ချရှိသည်ဟုသိလျက်, နျူကလိယ accumbens အတွက် DRD2 ရရှိနိုင်မှု (NACC) ကြွက်နှင့်မျောက်ဝံများအတွက်မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်အားဖြည့်အပြုအမူတွေနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုကိုပြသထားပါသည် -. ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် DRD2 ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်သပ္ပါယ်သို့မဟုတ်အစားထိုးစည်းမျဉ်းမှအလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို DRD321 ၏တတိယ intracellular ကွင်းဆက်အတွက် S2 ကျန်ကြွင်းတပ်ကိုလမ်းကြောင်းအပေါ် DRD5 ၏ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်လျော့နည်းမှုအရာ Cdk2 က phosphorylated နိုင်ပြပါ။ ဒါဟာအပြန်အလှန် DRD5 မျက်နှာပြင်ရရှိနိုင်မှု၏ dynamic သဘောသဘာဝချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါ dopaminoceptive အာရုံခံအတွက် Cdk2 နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ဝတ္ထုစည်းမျဉ်းယန္တရားအဆိုတင်သွင်း။
ဒါဟာ Cdk5 အဆိုပါအာရုံခံပတ်ဝန်းကျင်၏သပ္ပါယ်အပြောင်းအလဲများကိုဖြန်ဖြေအတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လူသိများကြောင်းမှတ်သားရပါမည်။ ဥပမာ, limbic ဆားကစ်၏အာရုံခံအတွက် dendritic ကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ပွောငျးလဲထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant ထိတွေ့မှု၏အကျိုးဆက်များ၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ . ဤပြောင်းလဲမှုများသည်တပ်တုန့်ပြန်ဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း (CREB) ၏သော induction နှင့်ΔFosBအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောမော်လီကျူးအပြောင်းအလဲတစ်ခုနာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှတုန့်ပြန်ဖွင့်-စည်းမျဉ်း၌အမြဲတည်သောပြပွဲတစ်ခုကိုကူးယူအချက်များဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည် , . အရေးကြီးတာက, Cdk5 ΔFosBတစ်ပစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည် , နှင့်ထိုကဲ့သို့သော PSD-95 အဖြစ် dendritic ကျောရိုးဒိုင်းနမစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အများအပြားအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းများ, p21-activated kinase (PAK), β-catenin နှင့် spinophilin, Cdk5 အလွှာအဖြစ်အစီရင်ခံခဲ့ကြသည် -. တသမတ်တည်း, Cdk5 လှုပ်ရှားမှုမျိုးဗီဇသို့မဟုတ် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး mesolimbic dopamine ဆားကစ်၏မော်လီကျူးများနှင့် morphological အပြောင်းအလဲများအတွက် Cdk5 များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍခဲ့ရသည်, ကိုကင်းဖို့ dendritic ကျောရိုး shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၏ပွောငျးလဲနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူ , . ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို DRD2 Cdk5 တစ်ဝတ္ထုပစ်မှတ်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတက်-စည်းမျဉ်း Cdk5 ၏ΔFosB-mediated ၏နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် dopamine စနစ်၏သပ္ပါယ်အပြောင်းအလဲများကိုသို့အပိုဆောင်းထိုးထွင်းသိမြင် DRD2 ၏ phosphorylation တစ်ဦးလုပ်သူများတိုးသွေးဆောင်စခွေငျးငှါကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း ။ ထိုမှတပါး, DRD2 စခန်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မြေပုံ kinase လမ်းကြောင်းနှင့်မြစ်အောက်ပိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်ရပ်များအပါအဝင်မြောက်မြားစွာဆယ်လူလာဖြစ်စဉ်များ, ထိခိုက်လူသိများသည် , . ထို့ကြောင့်ဒီလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိချက် Cdk2 အားဖြင့် DRD5 ၏တိုက်ရိုက်စည်းမျဉ်းကိုပုံဖျောဒါပေမယ့်လည်းနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ခြင်းမှ dopamine စနစ်၏သပ္ပါယ်တုံ့ပြန်မှုသို့ဝတ္ထုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးစေခြင်းငှါ, မသာ။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: JJ YUP DH SKP ။ JJ YUP DKK YK: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: JJ YUP DKK SL YK SAL HL YSG DH SKP ။ လှူဒါန်းခဲ့ဓါတ်ကူပစ္စည်း / ပစ္စည်းများ / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကိရိယာများ: YHS ။ JJ SKP: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
1 ။ Missale ကို C, Nash SR, ရော်ဘင်ဆင် SW, Jaber M က, caron MG (1998) Dopamine receptors: ဖွဲ့စည်းပုံကနေ function ကိုရန်။ Physiol ဗြာ 78: 189-225 ။
2 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2002) ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry: unsensed မက်လုံးပေးကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ အာရုံခံဆဲလျ 36: 229-240 ။ Doi: 10.1016 / s0896-6273 (02) 00965-0
3 ။ Neve Ka, Seaman JK, Trantham-Davidson H ကို (2004) Dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြ။ J ကို Reception Signal Transduct Res 24: 165-205 ။ Doi: 10.1081 / lrst-200029981
4 ။ Amar က S, Shaltiel, G, et al မန်း L ကို, ရှတစ်, ဒင်း B က။ schizophrenia များ၏ pathophysiology အတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုအချက်ပြ Post-dopamine D2008 အဲဒီ receptor ၏ (2) ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပါဝင်ပတ်သက်မှု။ int J ကို Neuropsychopharmacol 11: 197-205 ။ Doi: 10.1017 / s1461145707007948
5 ။ ကာဣန SB, Negus အက်စ်အက်စ်, Mello NK, Patel က S နဲ့, Bristow L ကို, et al ။ D2002 အဲဒီ receptor Mutant ကြွက်နှင့်ဝတ္ထု D2 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူလေ့လာမှုများ: ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ (2) အခန်းက္ပ။ J ကို neuroscience 22: 2977-2988 ။
6 ။ Lee က S နဲ့, et al Jeong J ကို, ပန်းခြံ YU, Kwak Y ကို, Lee က SA ။ (2012) Valproate Par-4 ပရိုတိန်းထုတ်ဖော်သော induction နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် dopamine အချက်ပြပွောငျးလဲ။ PLoS တစ်ခုမှာ 7: e45618 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0045618
7 ။ Fishburn CS, Elazar Z ကို, Fuchs S ကို (1995) ကို D2 dopamine အဲဒီ receptor ၏ရှည်လျားတိုတောင်း isoforms များအတွက် glycosylation နှင့် intracellular လူကုန်ကူးမှု Differential ။ J ကို Biol Chem 270: 29819-29824 ။ Doi: 10.1074 / jbc.270.50.29819
8 ။ Reader ကို TA, Molina-Holgado အီးလီမာ L ကို, Boulianne S က, Dewar KM (1992) Specific [3H] neostriatal dopamine D2 receptors မှ binding raclopride: disulfide နှင့် sulfhydryl အုပ်စုများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Neurochem Res 17: 749-759 ။ Doi: 10.1007 / bf00969008
9 ။ Ng သည် GY, O'Dowd BF, caron M က, ဒဲနစ် M က, Brann MR, et al ။ Sf1994 ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့လူ့ D2L dopamine အဲဒီ receptor ၏ (9) Phosphorylation နှင့် palmitoylation ။ J ကို Neurochem 63: 1589-1595 ။ Doi: 10.1046 / j.1471-4159.1994.63051589.x
10 ။ Li က M ကို, Bermak JC, ဝမ် ZW, dopamine: D (2000) actin-binding ပရိုတိန်း (ABP-2) ကအဲဒီ receptor အချက်ပြ၏ Zhou QY (280) Modulation ။ Mol Pharmacol 57: 446-452 ။
11 ။ cho: D, Zheng က M, အောင်မင်း, C, Ma L ကို, Kurose H ကို, et al ။ (2010) Agonist-သွေးဆောင် endocytosis နှင့်အဲဒီ receptor phosphorylation dopamine: D (2) receptors ၏ resensitization ဖျန်ဖြေ။ Mol Endocrinol 24: 574-586 ။ Doi: 10.1210 / me.2009-0369
12 ။ Tsai LH, Delalle ငါ Caviness VS Jr က Chae T က, Harlow အီး (1994) p35 cyclin-မှီခို kinase5တစ်ဦးအာရုံကြော-တိကျတဲ့စည်းမျဉ်း subunit ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝတရား 371: 419-423 ။ Doi: 10.1038 / 371419a0
13 ။ Dhavan R ကို, Tsai LH (2001) CDK5 ၏တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်။ နတ်ဗြာ Mol ဆဲလ် Biol 2: 749-759 ။ Doi: 10.1038 / 35096019
14 ။ ဖူ AK, IP နယူးယော့ (2007) Cyclin-မှီခို kinase5dendritic ကျောရိုးဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်း actin cytoskeleton မှ extracellular တွေကိုချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ cell Adh Migr 1: 110-112 ။ Doi: 10.4161 / cam.1.2.4617
15 ။ ဝမ် J ကို, လျူက S, ဖူ Y ကို, ဝမ် JH, Lu Y ကို (2003) Cdk5 activation တိုက်ရိုက် NMDA receptors phosphorylating အားဖြင့် hippocampal CA1 ဆဲလ်အသေခံဖြစ်ပေါ်သည်။ နတ် neuroscience 6: 1039-1047 ။ Doi: 10.1038 / nn1119
16 ။ Zhang က S နဲ့, Edelmann L ကို, လျူ J ကို, Crandall je, Morabito MA (2008) Cdk5 tyrosine 1472 NR2B ၏ phosphorylation နှင့် NMDA receptors ၏မျက်နှာပြင်စကားရပ်ကိုထိန်းညှိ။ J ကို neuroscience 28: 415-424 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.1900-07.2008
17 ။ Moy Ly, Tsai LH (2004) Cyclin-မှီခို kinase5tyrosine hydroxylase ၏ serine 31 phosphorylates နှင့်၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းညှိ။ J ကို Biol Chem 279: 54487-54493 ။ Doi: 10.1074 / jbc.m406636200
18 ။ Bibb ဂျာ Snyder GL, Nishi တစ်ဦးက, ယန် Z ကို, Meijer L ကို, et al ။ Cdk1999 အားဖြင့် DARPP-32 ၏ (5) Phosphorylation အာရုံခံအတွက် dopamine အချက်ပြ modulates ။ သဘာဝတရား 402: 669-671 ။
19 ။ Bibb ဂျာ Chen က J ကို, တေလာ JR, Svenningsson P ကို, Nishi တစ်ဦးက, et al ။ ကိုကင်းမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု၏ (2001) အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာအာရုံခံပရိုတိန်း Cdk5 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ သဘာဝတရား 410: 376-380 ။
20 ။ Ohshima T က, Ogawa M က, Veeranna, Hirasawa M က, Longenecker, G, et al ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် cortical အာရုံခံ၏ positioning ကိုမှ cyclin-မှီခို kinase 2001 / p5 နှင့် Reelin / Dab35 ၏ (1) များ၏ညှိနှိုင်းပံ့ပိုးမှုများကို။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 98: 2764-2769 ။ Doi: 10.1073 / pnas.051628498
21 ။ Morabito MA, Sheng က M, Tsai LH (2004) Cyclin-မှီခို kinase5အာရုံခံအတွက် postsynaptic သိပ်သည်းဆပရိုတိန်း PSD-95 များ၏ N-terminal ကိုဒိုမိန်း phosphorylates ။ J ကို neuroscience 24: 865-876 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.4582-03.2004
22 ။ et al ပန်းခြံ SK ကို, ငုယင် MD, Fischer တစ်ဦးက, လုကာပါလီမန်အမတ်, Affar el B က။ (2005) Par-4 dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ cell 122: 275-287 ။ Doi: 10.1016 / j.cell.2005.05.031
23 ။ Niethammer M က, Smith က DS, et al Ayala R ကို, Peng J ကို, Ko J ကို။ (2000) NUDEL LIS5 နှင့် cytoplasmic dynein နှင့်အတူဆက်စပ်တဲ့ဝတ္ထု Cdk1 အလွှာဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ 28: 697-711 ။ Doi: 10.1016 / s0896-6273 (00) 00147-1
24 ။ ကင်မ် KM, Valenzano KJ, et al ရော်ဘင်ဆင် SR, Yao အဘိဓါန် WD, ဗာရ LS ။ (2001), G ပရိုတိန်း-coupled receptor kinases နှင့် beta ကို-arrestins အားဖြင့် dopamine D2 နှင့် D3 receptors ၏စည်းမျဉ်း Differential ။ J ကို Biol Chem 276: 37409-37414 ။ Doi: 10.1074 / jbc.m106728200
25 ။ Waldhoer M က, Bofill-Cardona အီး, Milligan, G, Freissmuth M က, Nanoff ကို C (1998) suramin နှင့် didemethylated suramin (NF1) က A2 adenosine နဲ့ D037 dopamine receptors ၏ uncoupling Differential ။ Mol Pharmacol 53: 808-818 ။
26 ။ et al Bofill-Cardona အီး, Kudlacek အိုယန်မေး, Ahorn H ကို, Freissmuth M က။ အဆိုပါ D2000-dopamine အဲဒီ receptor မှ calmodulin ၏ခညျြနှောငျ (2) က, G ပရိုတင်းကို Activation switch ကိုဖမ်းဆီးသဖြင့်အဲဒီ receptor အချက်ပြလျော့နည်းစေသည်။ J ကို Biol Chem 275: 32672-32680 ။ Doi: 10.1074 / jbc.m002780200
27 ။ ကြွက်ဦးနှောက်ဒေသများသို့ binding [1981H] spiperone ၏ dopamine နှင့် serotonin အဲဒီ receptor အစိတ်အပိုင်းများများစာရင်း SJ, Seeman P ကို ​​(3) ဆုံးဖြတ်ချက်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 78: 2620-2624 ။ Doi: 10.1073 / pnas.78.4.2620
28 ။ D1998 မှာ Gardner B ကို, ထူးဆန်း PG (2) Agonist အရေးယူမှု (ရှည်လျားသော) dopamine receptors: ligand စည်းနှောင်ခြင်းနှင့် functional assay ။ br J ကို Pharmacol 124: 978-984 ။ Doi: 10.1038 / sj.bjp.0701926
29 ။ လူ့ positron ထုတ်လွှတ် tomography များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: Seeman P ကို, Tallerico T က, Ko က F (2003) Dopamine ဟာ dopamine D3 အဲဒီ receptor ၏မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့က်ဘ်ဆိုက်များကနေ [2H] domperidone, ဒါပေမယ့်မပေး [3H] raclopride သို့မဟုတ် isotonic အလတ်စားအတွက် [3H] spiperone နေရပ်စွန်ခွာ။ synapses 49: 209-215 ။ Doi: 10.1002 / syn.10232
30 ။ Obenauer JC, Cantley LC, Yaffe ကို MB (2003) Scansite 2.0: အတို sequence ကို motif သုံးပြီးဆဲလ်အချက်ပြ interaction က၏ Proteome-ကျယ်ပြန့်ခန့်မှန်း။ Nucleic Acid Res 31: 3635-3641 ။ Doi: 10.1093 / နား / gkg584
31 ။ လျူ H ကို, Sadygov RG, Yates JR 3rd (2004) ShotGun proteomics အတွက်ဆွေမျိုးပရိုတိန်းကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်ကျပန်းနမူနာများနှင့်ခန့်မှန်းချက်များအတွက်မော်ဒယ်။ စအို Chem 76: 4193-4201 ။ Doi: 10.1021 / ac0498563
32 ။ Ito ကငွေကျပ်, dopamine D1999 receptors ၏ Haga T က, Lameh J ကို, Sadee W က (2) Sequestration, G-ပရိုတိန်း-coupled receptor kinases2သို့မဟုတ်5၏ coexpression ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ EUR J ကိုထဲကဓာတုပစ်စညျး 260: 112-119 ။ Doi: 10.1046 / j.1432-1327.1999.00125.x
33 ။ Namkung Y ကို, Sibley DR (2004) ပရိုတိန်း kinase ကို C phosphorylation, desensitization, နှင့် D2 dopamine အဲဒီ receptor ၏လူကုန်ကူးမှု mediates ။ J ကို Biol Chem 279: 49533-49541 ။ Doi: 10.1074 / jbc.m408319200
34 ။ Wong က AS, Lee က RH အ, ချောင် AY, Yeung PK, Chung SK ကို, et al ။ B2011 endophilin ၏ (5) Cdk1-mediated phosphorylation ပါကင်ဆန်ရောဂါမော်ဒယ်များအတွက်သွေးဆောင် autophagy ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ နတ်ဆဲလ် Biol 13: 568-579 ။ Doi: 10.1038 / ncb2217
35 ။ Kesavapany S က, Lau KF, et al McLoughlin DM, Brownlees J ကို, Ackerley S က။ (2001) p35 / cdk5 ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် phosphorylates beta ကို-catenin နှင့် beta ကို-catenin / presenilin-1 အပြန်အလှန်ထိန်းညှိ။ EUR J ကို neuroscience 13: 241-247 ။ Doi: 10.1046 / j.1460-9568.2001.01376.x
36 ။ Kuhar MJ, Ritz MC, Boja JW (1991) ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ dopamine ယူဆချက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 14: 299-302 ။ Doi: 10.1016 / 0166-2236 (91) 90141-ဂရမ်
37 ။ et al Volkow ND, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Schlyer: D, Shiue CY ။ postsynaptic dopamine receptors အပေါ်နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှု (1990) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 147: 719-724 ။
38 ။ Dalley JW, Fryer TD, Brichard L ကို, ရော်ဘင်ဆင် ES, Theobald DE, et al ။ (2007) နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ 315: 1267-1270 ။ Doi: 10.1126 / science.1137073
39 ။ Nader, MA, မော်ဂန်: D, Gage, HD, Nader SH, Calhoun TL, et al ။ မျောက်များအတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine D2006 receptors ၏ (2) ပေပုံရိပ်။ နတ် neuroscience 9: 1050-1056 ။ Doi: 10.1038 / nn1737
40 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb B က (1997) နျူကလိယ accumbens နှင့်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူယခင်အတွေ့အကြုံကနေထုတ်လုပ် prefrontal cortex အာရုံခံအတွက် Persistent ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို neuroscience 17: 8491-8497 ။
41 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb B က (1999) ALTER စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၌တည်၏။ EUR J ကို neuroscience 11: 1598-1604 ။ Doi: 10.1046 / j.1460-9568.1999.00576.x
42 ။ McClung, CA, CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏ Nestler EJ (2003) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ နတ် neuroscience 6: 1208-1215 ။ Doi: 10.1038 / nn1143
43 ။ Feng တို့ဂျေ, ယန် Z ကို, Ferreira တစ်ဦးက, Tomizawa K ကို Liauw ဂျာ et al ။ (2000) Spinophilin dendritic ကျောရိုး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် function ကိုထိန်းညှိ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 97: 9287-9292 ။ Doi: 10.1073 / pnas.97.16.9287
44 ။ ရမ်, အိုမာဖီ TH (2001) postsynaptic သိပ်သည်းဆ-95 ပြွတ်နှင့် cortical အာရုံခံ၏အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းတည်ငြိမ်ကျောရိုးရှေ့နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ၏ရွေ့ပြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ J ကို neuroscience 21: 9325-9333 ။
45 ။ Murase S က, Mosser အီး, Schuman EM (2002) Depolarization Synaptic ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲမြှင့်တင်အာရုံခံကျောရိုးသို့ beta ကို-Catenin မောင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 35: 91-105 ။ Doi: 10.1016 / s0896-6273 (02) 00764-x
46 ။ Hayashi ML, Choi SY, Rao က BS, Jung hy, Lee ကဟောင်ကောင်, et al ။ (2004) cortical Synaptic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့် forebrain- တိကျတဲ့ကြီးစိုး-အနုတ်လက္ခဏာ PAK Transgene ကြွက်များတွင်ချို့ယွင်းမှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ 42: 773-787 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2004.05.003
47 ။ Benavides DR, Quinn JJ, Zhong P ကို, Hawasli AH, DiLeone RJ, et al ။ (2007) Cdk5 ကင်းဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့် striatal အာရုံခံဆဲလျစိတ်လှုပ်ရှား modulates ။ J ကို neuroscience 27: 12967-12976 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.4061-07.2007
48 ။ et al Meyer DA, ပို E ကို, Benkovic လုပ် SA, Hayashi K ကို Kansy JW ။ Cdk2008 ၏ (5) Striatal dysregulation ကိုကင်း, မော်တာသင်ယူမှုနှင့် dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်မှ locomotor တုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်နိုင်ငံ 105: 18561-18566 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0806078105
49 ။ Impey S က, Obrietan K ကိုမုန်တိုင်း DR (1999) အသစ်သို့ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်း: အာရုံခံ plasticity အတွက် ERK / MAP kinase အချက်ပြ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံခံဆဲလျ 23: 11-14 ။ Doi: 10.1016 / s0896-6273 (00) 80747-3